Mogadishu Journal » Hay’addaha QM ayaa sheegay in dhimayaan deeqaaha raashinka ah oo ay siiyaan qaxootiga Dhadhaab
Mjournal : — Hay’adda QM u qaabilsan cunada aduunka ee WFP iyo hay’adda qoxootiga adduunka ee UNHCR oo ka mid ah kuwa QM ayaa sheegay in ay yareynayaan raashinkii ay siin jireen qoxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xeryaha qoxootiga Dhadhaab-Kenya.
Hay’adda WFP Afhayeen u hadashay waxaa ay sheegtay in dhaqaale la’aan awgeed ay u qaateen go’aankan, iyadoo xustay in dalalkii deeqaha bixin jiray aysan ka helin dhaqaale ku filan caawinta qoxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab.
“Ujeedada ugu weynwaa lacag la’aan, bil walba waxaan siinnaa qoxootiga raashin dhan 10-kun oo mitirik-tan oo raashin ah, taasoo ay ku kici jirtay bil walba 10,000 oo doollar, khasab ayayna nagu tahay inaan dhinno,” ayay tiri afhayeenadda oo lagu magacaabo Jerred.
Afhayeenka ayaa intaa ku darrtay in dadaal badan ay u galeen sidii arrintan looga baaqsan lahaa, balse ay khasab ku noqotay, kaddib markii ay nagu adkaatay inaan helno dhaqaalihii aan u baahnayn ee aan doonayay in aan ku caawinno qoxootiga.
Bil walba labo jeer ayaa la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha Dhadhaab raashin ku filan, iyadoo qoxootigu ay sheegeen in raashinka ay bishiiba ka helaan hay’adaha gargaarka uusan ahayn mid ku filan.
‘’Waa talaabo si ku-meel-gaarka ah ugu dhimanyno inta dhaqaale laga helayo dalalka deeqaha bixiya, waayo waxaan doonaynaa inaan raashinka aan haynno aan gaarsiinno qoxootiga labada bilood ee soo socda ee November iyo December waayo haddii aan yareyn gargaarka ma gaarsiin karno qoxootiga,” ayay mar kale tiri afhayeenadda.
Dhanka kale, madaxa guddiga gargaarka ee xeryaha qoxootiga, Cabdiqaadir Xuseen Buulle ayaa sheegay in qoxootiga ay walaac xooggan gelisay hadalka kasoo baxay hay’adaha gargaarka, isagoo sheegay in markii horeba ay aad u yaraayeen gargaarkii ay heli jireen.
“Qoxootiga waxay bishiiba qaadan jireen gargaarka hay’adaha laba jeer, iyadoo mar walba la siin jiray 3-km oo bariis ah ama masago ah iyo bakeeri saliid-caddey ah, taasina ma ahayn mid ku filan, balse kaalmo ayay u ahayd,” ayuu yiri Buulle.
Arrintan ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dowladda Kenya ya dhawaan sheegtay inay qorsheynaso inay qoxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan dalkeeda ay dib ugu celiso Soomaaliya.